Top 10 Best ugu fiican Inuu hubiyo 4k
Technology 4K qabsaday suuqa oo ay tahay mid ka mid ah farsamooyinka ugu wanaagsan in lagu isticmaalo arrintan la xiriira in la hubiyo in technology ah in la sameeyo dhaafa dadka kale ee la xiriirta xallinta iyo arrinta guud ee arrintan la xiriira. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan kormeerayaasha 4K in la soo saarayo arrintan la xiriira.
Waa maxay 4k monitor?
Top 10 4K kormeerayaasha
Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah xubnihii hardware tahay in lagu heli karaa suuqa si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican iyo xallinta guud ahaan in aan bixiyo qaab kasta oo kale. The uqaabeeyaan sare kormeerayaasha kor taas oo ka duwan kuwa inta kale waa sida soo socota:
a. Qaraarka Sare
Waa farsamo ugu horrayn waxa weeyi in la arkaa in marka ay timaado in kormeerayaasha 4K iyo waxa ay sidoo kale hubineysaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in arrintan la xiriira in aan ku salaysan oo keliya ku saabsan xallinta sare, laakiin sidoo kale ka dhigaysa hubiyo in habka ugu fiican yahay, sidaa daraadeedna soo saaray arrintan la xiriira.
b. Price farqiga
Waxaa sidoo kale in la xuso in user lahaa si ay u iibsadaan, kuwaas oo kormeerayaal in yihiin kuwa ugu fiican iyo gobolka of farshaxanka sidaas darteed waa in la ogaadaa in dadka isticmaala ee waa in sidoo kale la hubiyo in qiimaha ugu wanaagsan waxaa sidoo kale lagu bixiyey kormeerayaasha kuwan. Qaar ka mid ah ay yihiin sare oo xitaa ka badan 100 - 200% ee wadarta guud.
c. Qalabka kala duwan yihiin
Qalab guud oo loo isticmaalo in arrintan la xiriira waa state of farshaxanka iyo sidaas darteed waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in qalabka ugu wanaagsan ayaa lagu iibsaday arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ay dib u eegista guud ayaa sidoo kale la bartay in arrintan la xiriira.
Ka dib waa top toban fiican iyo gobolka of farshaxanka 4K kormeerayaasha in ay tahay in la iibsaday natiijada ugu wanaagsan.
1. ASUS PB287Q 28 "4K / UHD 3840x2160 1ms DisplayPort HDMI Ergonomic Back-shiday LED Monitor
28 inches 4K UHD xallinta, 4 jeer ku pixel ee FHD, 1ms waqtiga jawaabta.
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka of tahay 4K monitor ah in la hubiyo in user helo bandhigay ugu fiican iyo natiijada guud ayaa sidoo kale xiiirka arrintan la xiriira ka dhigi lahaa. Ayaa dib u eegista guud ee hardware sidoo kale waa waxa ugu fiican oo sidaas daraaddeed buu u weyn ayaa sidoo kale lagu talinayaa in arrintan la xiriira.
Kharashka: $ 469
Number of iibka ee 2014 : In ka badan 4 million
2. Dell Ultra HD 4k Monitor P2715Q 27-inji Screen LED-idmay Monitor
99% caymiska midabka RGB, Delta E shahaado
Waa mid ka mid ah xubnihii hardware yar taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah xallinta pixel tahay waxaa la siiyaa user ee arrintan la xiriira iyo arrinta guud ee qaraarka xun ayaa sidoo kale aqoon saday habka ugu wanaagsan ee Dell oo waxaa lagu gartaa for.
Kharashka : $ 519
Number of iibka ee 2014 : In ka badan 2 million
3. Dell Ultra HD 5K Monitor UP2715K 27-inji Screen LED-idmay Monitor
Native 5K xallinta, 99% adobe RGB iyo 14 million pixels ee hal-abuurka.
Waa kuwa ugu qaalisan oo dhan ayaa la xusay in arrintan la xiriira, sidaas darteed waa in sidoo kale lagu xusay in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay waxaa sidoo kale raacay halka meel la shaqeeya.
Kharashka: $ 1720
Number of iibka ee 2014 : In ka badan 1 million
4. ASUS PQ321Q 31.5-inji 4K Monitor
4 jeer qaraarka ka buuxay HD, technology guddi IGZO, ka dhisay bandhigay dekedda.
ASUS weli fiican kale oo gobolka ka mid ah hardware tahay in ka dhigi lahaa pacifiy user ku fadhiya sariirta yimaado. The Details ugu fiican iyo guud ee monitor waa kuwa ugu fiican iyo dib u eegis rating user sidoo kale waa sare ee arrintan la xiriira.
Kharashka: $ 1899
5. Acer XB280HK bprz 28-inch Display Ultra HD 4K2K NVIDIA G-u hagaagsan (3840 x 2160) Widescreen Monitor
XB 28 monitor, Ultra technology 4K2K HD, technology NVIDIA GSYNC.
Acer waa shirkad in la og yahay ee awesomeness oo ugu wanaagsan iyo gobolka of technology tahay in ay tahay in la isticmaalo arrintan la xiriira in uu yahay waxa ugu fiican ee. Monitor 4K Tani waxay sidoo kale gaysteen oo isku mid ah oo ay sidoo kale u ogolaataa user ay u fiican uga soo saari heshiiska waxiibsashada sameeyey.
Kharashka: $ 651
Number of iibka ee 2014 : In ka badan 3 million
6. Philips 28-inji 4K Ultra HD LED soco w / 3840 x 2160 xallinta (288P6LJEB)
4K UHD 60Hz xallinta, 1.07 bilyan oo midabo, 300 CD / nuur dhalaalaya m2 iyo aragtida kala duwan.
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka monitor tahay in la hubiyo in user helo natiijada in ay yihiin dhabayseen iyo in aan helay meelo kale ka dhigi lahaa. Philips ayaa sidoo kale lagu yaqaan tayada iyo qaababka ugu fiican in la socotid badeecada gudaha iyo monitor tani waa mid ka mid ah tusaale ahaan sida.
Kharashka : $ 449
Number of iibka ee 2014 : In ka badan 7 million
7. Dell UltraSharp UP3214Q 31.5-inji Screen LED-idmay Monitor
99% caymiska adobe EGB, 100% caymiska sRGB, 31.5 bandhigay iyo Multitasking.
Dell waa magac ka mid ah oo tayo leh oo sidaas daraaddeed waa ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in ayaa gundhig gudahood barnaamijka si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah caymiska farshaxanka iyo aragtida guud ee arrintan la xiriira ka.
Kharashka : $ 1699
8. Planar UltraRes UR8450-MX-Ero-BT 84-inji Screen LED-idmay Monitor
Model 2D screen Touch, Ultra caato profile, Energy badbaadinayo technology backlight aalladda
Waa shayga ugu qaali liiska iyo sabab la mid ah, waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka waslad tahay in lagu Xusi liiskan gudahood ah. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo aragtida ugu fiican iyo qiimaha Sidaa darteed waa cudur daar arrintan la xiriira.
Kharashka: $ 29.465
Number of iibka ee 2014 : In ka badan 1000
9. Dell P2815Q Ultra HD 28-inji Screen LED-idmay Monitor
Pin faahfaahin fiiqan, multi bandhigay shaqeynayaan, tayada sawirka aad u fiican.
Dell Samaynta wadaag geeddi-socodka waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah siyaabaha tahay in la hubiyo in user helo guud ahaan heerka ku qanacsanaanta user in had iyo jeer raadinaya. Sidoo kale waa mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay in uu yahay sare ee baahida iyo dib u eegista iyo sidoo sheekada.
Kharashka: $ 588
10. Acer B286HK ymjdpprz 28-inch 4K2K UHD (3840 x 2160) Widescreen Display la ErgoStand
Qaraarka 4k2k in uu yahay toban jeer HD ku Ultra, taxane B6 gundhig, 5 USB xawaaraha sare ee 3.0 dekedaha.
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka masterpieces tahay in sidoo kale ku riyaaqaya rating sare. Iyadoo in ka badan 1 milyan oo midabo kala gundhig tani waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee ku saabsan tahay in arrintan la xiriira.
Kharashka: $ 419
Number of iibka ee 2014 : In ka badan 6 milyan
> Resource > Video > 10ka ugu wanaagsan ee Best Inuu hubiyo 4k